Zinedine Zidane Oo Magacaabay Xiddigii Ugu Adkaa Ee Abid Ay Garoomada Iskaga Hor Yimaaddeen Xilligii Uu Ciyaartoyga Ahaa - Gool24.Net
Zinedine Zidane Oo Magacaabay Xiddigii Ugu Adkaa Ee Abid Ay Garoomada Iskaga Hor Yimaaddeen Xilligii Uu Ciyaartoyga Ahaa
Zinedine Zidane ayaa shaaciyey magaca ciyaartoygii ugu adkaa ee abid uu garoomada ku waajahay xilligii uu ciyaartoyga ahaa oo uu guulo badan usoo hooyey xulka qarankiisa France, Real Madrid iyo naadigiisii Juventus oo ahayd meeshii uu kasoo galay Yurubta waaweyn kaddib soo shaac-bixistiisii Marseille.
Zidane oo ay da’diisu tahay 48 jir, waa tababaraha hadda ee Real Madrid oo u qaaday saddex Champions League, laba horyaal oo LaLiga ah iyo koobab kale oo maxalli iyo caalami ba ah.
Hase yeeshee waqtigii uu garoomada ku jiray waxa uu ahaa laacib aan la loodin karin oo farsamooyin layaab leh lahaa, waxaana lagu tilmaamaa inuu ka mid yahay laacibiintii ugu wanaagsanaa ee kasoo ciyaaray khadka dhexe dhexe taariikhda kubadda cagta.
Sannadkii 2002 waxa uu Real Madrid ugu qaaday Champions League gool qurux badan oo uu ku dhaliyey lugta bidix kaddib kubbad uu ka helay Roberto Carlos oo iyadoo aan dhulka taabanin uu darbo cajiib ah ku qabtay meel ka baxsan xerada ganaaxa, taas oo Bayer Leverkusen ay koobka kaga qaateen. Waxa kale oo uu Los Blancos la qaaday horyaalka LaLiga ka hor intii aanu ciyaaraha ka fadhiisanin iyadoo kubaddiisu heersare marayso.
Waqtigii uu joogay Juventus, waxa uu la qaaday laba horyaal oo Serie A iyo xulka qarankiisa oo uu kula guuleystay Koobkii Adduunka 1998kii oo goolal uu ka dhaliyey Brazil ay koobka ku hantiyeen iyo sidoo kale Euro 2000 oo Talyaaniga ay ku garaaceen.
Zinedine Zidane oo la weydiiyey ciyaartoygii ugu adkaa ee ay garoomada foodda isku dareen, waxa uu si fudud ula soo baxay halyeygii khadka dhexe uga ciyaari jiray Manchester United ee Paul Scholes, waxaanu yidhi: “Waa wax dabiici ah inaad doonto xulashada ciyaartoyda ugu wanaagsan, shakina igagama jiro in Paul Scholes uu gaadhsiisnaa heer isaga u gaar ah.
“Waxyaabaha uu qabtay maaha kuwo la taaban karayo. Marna kama daalo inaan daawado isaga, waxyaabo naadir ah ayaad kala kulmaysaa balse Scholes wuxuu ahaa mid mar walba aad kuugu dhegsanaanaya. Waxyaabaha aan ka qoomamoonayo ayay ka mid tahay in aanan ka garab ciyaarin isaga oo aanaan koox wada metelin intii aan ciyaaraha ku jiray.”
Scholes oo ay da’diisu tahay 45 jir, waxa uu ka mid yahay ciyaartoyda ugu guulaha badan horyaalka Premier League, waxaanu kula guuleystay Red Devils 11 horyaal oo Premier League ah, saddex FA Cup , laba League Cup iyo laba Champions League.